November 12, 2019 - Myitter
နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းပြတာတောင် ခွေးငတ် ရေခဲမုန့် လျက်ပြနေ သလိုကြီး…
November 12, 2019 Myitter 0
မြန်မာပြည်က အနုပညာအဆင့်အတန်းဆိုသည်မှာလည်း အတော်စိတ်လေစရာကောင်းလွန်းတယ်။ အပြာဆန်ဆန်ရိုက်တယ်… အိုကေ… ထားပါ … Conservative မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာပုတယ် ညာပုတယ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဘလာဘလာတွေလည်း မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပြာတောင် အဆင့်မီအောင် မရိုက်နိုင်ဘဲ ကကျိုးကကြောင်တွေ ထွက်လာသေးတယ်… စိတ်ထကြွအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ရိုက်တာတောင် စိတ်မထကြွဖို့နေနေသာသာ ရှိပြီးသာ […]
ဘုရားက အလှူခံပုံးဖောင်ထွင်းနေတဲ့ သူခိုးကို သတ္တိရှိရှိ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ အန်တီကြီးကို ဆုငွေချီးမြင့်ပြီ
ဘုရားက အလှူခံပုံး ဖောင်ထွင်းနေတဲ့ သူခိုးကို သတ္တိရှိရှိ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ အန်တီကြီးကို ဆုငွေချီးမြင့်ပြီ တခါတရံ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်…. ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထဲကလို လူစွမ်းကောင်းတွေပေါ့…ဒါပေမဲ့ ပြင်ပလောက က တာဝန်သိလူစွမ်းကောင်းတွေကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားတွေ မရှိကြပါဘူး… ဒီလိုမရှိကြပေမဲ့လည်း သူတို့ရဲ့ […]
အသက်မသေခင် အလှူလုပ်ချင်လို့ ခဏခဏ လာမဖမ်းပါနဲ့လို့ ပြောလာတဲ့ ပေါင်မုန့်ရောင်းတဲ့ ဖွား….
အသက်မသေခင် အလှူလုပ်ချင်လို့ ခဏခဏ လာမဖမ်းပါနဲ့လို့ ပြောလာတဲ့ ပေါင်မုန့်ရောင်းတဲ့ ဖွား ယနေ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်ဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်း ငွေရှာနေရသူ အဖို့မှာတော့ တကယ့်ကို လိုက်မမှီတဲ့ လေယာဉ်ကြီး တစ်စင်းလိုပါပဲ။ ဒီလိုခေတ်ကာလကြီးမှာ ရှင်သန်နေကြတဲ့ လူတွေအထဲမှာ ဘဝကို ရုန်းကန်နေရတဲ့ အဖွားအို တစ်ဦးလည်း […]
သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့ပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ခဲ့မူကြီး…..
သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့ပြီး သတ်ပစ်ခဲ့. မနေ့ည က ၁၀နာရီခန့်တွင် ကိုးဆူ တံတားထိပ် လယ်ကွင်းတွင်အလောင်း တစ်လောင်းပစ်ထားခဲ့သည်ဟု ယနေ့နံနက်အဖမ်းခံသည့်တရားခံ ထံမှ ဝန်ခံသတင်းရရှိပြီး ရဲနှင့်ပြည်သူဝိုင်းဝန်းရှာဖွေကြရာ ၁၂.၁၁.၂၀၁၉နေ့ မွန်းလွဲ၁နာရီခန့်တွင် အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်း လယ်ကွင်းအတွင်းတွေ့ရှိ ရပြီး ဥပဒေအရဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးမှာ ပြင်ခရိုင် ဘက်မှာနေထိုင်ကြောင်း အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်သိရှိရကာ မိဘများ အတိအကျအမှန်မသိရသေးပါ… […]
ဘယ်သူ့ ဆီကမှ ထောက်ပံ့စရိတ်မယူပဲ ပုဂံဆေးအမှိုက်ကောက်အလုပ်နဲ့ကျောင်းစရိတ်ရှာပြီး ဘွဲရအောင်ယူခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ပညာရှာပမာသူတောင်းစားဆိုတဲ့အတိုင်း ဘယ်အခြေအနေပဲရောက်နေပါစေ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ပညာသင်ယူနိုင်တာဟာ လူတော်တွေသာလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားစွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီး ပိုက်ဆံရှာတာကလည်း ရှက်စရာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။ ယခုပြသထားတဲ့ပုံထဲက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကလည်း ဘယ်သူ့ဆီကမှ အ ထောက်အပံ့အကူအညီမယူပဲ ပုံဂံဆေး […]
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ည နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက် ကျုံဒိုး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှ အသက်ပေးသွားကျသော ရဲဘော်များ…
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ည နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက် ကျုံဒိုး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရသူစာရင်း။ 12.Nov.2019 ၁။ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကြိုင်…(ကျဆုံး) ၂။ ရဲတပ်သား ဌေးဝင်း…(ကျဆုံး) ၃။ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး စောခင်ညွှန့်…(ကျဆုံး) ၄။ ဦးဇော်ဝမ်း(၃၁)နှစ် အရပ်သား (သေဆုံး) ၅။ ရဲအုပ် မျိုးမင်းထွန်း (မစိုးရိမ်ရ) […]
ဗိုကျဆာလို့ ရဲစခနျးကိုဖုနျးလှမျးဆကျတဲ့ ကလေးလေးကို ကိုယျတိုငျမုနျ့လာပို့ပေးခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ
ဗိုကျဆာလို့ ရဲစခနျးကိုဖုနျးလှမျးဆကျတဲ့ကလေးလေးကို ကိုယျတိုငျမုနျ့လာပို့ပေးခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ အမရေိကနျပွညျထောငျစု၊အရီဇိုးနားပွညျနယျ၊နတေဲ့အသကျ (၅)နှဈသားအရှယျကလေးတဈယောကျဟာဗိုကျဆာတဲ့အတှကျမကျဒေါနယျဆိုငျကနမေုနျ့စားခငျြတဲ့အကွောငျးကိုကိုယျတိုငျ ကိုယျကရြဲစခနျးကိုဖုနျးဆကျခဲ့ပါတယျ။ရဲအရာရှိကအသအေခြာမေးခဲ့ပွီးတဲ့ကလေးဆီကိုမုနျ့လာပို့တဲ့အဖွဈပွီးခဲ့တဲ့နကေ့ဖွဈကှားခဲ့ပါတယျ။ ခြာလီလို့ချေါတဲ့အသကျ(၅)နှဈသားအရှယျကောငျလေးဟာဒသေရဲစခနျးမီဆာပူးလဈရဲဌာနကိုဖုနျးဆကျခဲ့ပါတယျ။သူဟာမကျဒေါနယျစားခငျြးနကွေောငျးနဲ့အခုအခြိနျမှာဗိုကျဆာနကွေောငျးကို လှမျးပွောခဲ့ပါတယျ။ အရာရှိအနျတိုနီကဖုနျးကိုငျခဲ့ပွီးသားလေးအလငျြလို့နလေားလို့ ပွနျမေးခဲ့ပါတယျ။ကလေးကဟုတျတယျလို့ပွောခဲ့ခြိနျမှာလိပျစာကိုလိုကျမှတျထားခဲ့ပါတယျ။ နောကျတော့စခနျးကအရာရှိ စကော့ဗဲလျဒကျဈကသူကငျးလှညျ့ရမယျ့အခြိနျနဲ့တိုကျကာဖုနျးဆကျပွီး(၁၅)မိနဈအကွာမှာပဲကလေးရှိတဲ့နရောကိုမကျဒေါနယျနဲ့အတူလာပို့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ခြာလီရဲ့ မိသားစုတှအေိမျမှာရှိနကွေပမေဲ့ဖုနျးဆကျလိုကျတာကိုမသိလိုကျဘဲအရာရှိရောကျလာမှဖွဈကွောငျးကုနျစငျကိုသိခဲ့ရပါတယျ။ အရာရှိက ကလေးငယျနဲ့အတူတူဓာတျပုံရိုကျကာစခနျးရဲ့မီဆာပူးလဈဖဘေု့တျပမှေ့ာတငျခဲ့ကာအခုလိုကလေးတှကေတောငျးဆိုတဲ့ဝနျဆောငျမှုတှကေိုလညျးစခနျးကလဈြလြူမရှုပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့အရာရှိကသခြောရှငျးပွခဲ့တာက ကလေးကအခုလိုမှာတာကိုသူကလာပို့ခဲ့ရတာမြိုးကသူ့ကိုတကယျလိုအပျတဲ့နရောမြိုးတှလှေတျသှားနိုငျတာကွောငျ့ ရဲဌာနရဲ့စညျးကမျးလေးတှကေိုသတိပွုပေးဖို့လိုမယျလို့ပွညျသူတှကေို အသိပေးခဲ့ပါတယျ။လကျရှိအခြိနျမှာပြျောစရာ နလေ့ယျစာဆိုတဲ့ကလေးလေးတှကေအရာရှိကိုမုနျ့မှာတဲ့ကိစ်စက ရပေနျးစားနတေဲ့အပျေါရဲဌာနကအခုလိုပွနျရှငျးပွခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ သူရေး(ဆနျးသဈစ) ဗိုက်ဆာလို့ […]
ဒူးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးနည်း….
ဒူးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးနည်း ရှောက် သီး (၁) လုံး ၊ ကြက်သွန် နီ (၁) လုံး၊ နှီး (သို့) ကြိုး (၁) ချောင်း၊ မြေ အိုး (၁) လုံး။ ပြု လုပ် ပုံ […]
ကယန်းဒေသက ကတ်သလစ်ခရစ်ယာန်များ၏ ကြည်ညိုဖွယ်ရာစိတ်ဓာတ်လေးများက ဒီလိုပါတဲ့ဗျာ……့👇
ကယန်းဒေသက ကတ်သလစ်ခရစ်ယာန်များ၏ ကြည်ညိုဖွယ်ရာစိတ်ဓာတ်လေးများက ဤသို့👇 ခရစ်ယာန် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနေတဲ့ ကယန်းဒေသမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုလို့ ဒေသကိုတာဝန်ကျတဲ့ ကျောင်းဆရာ ၊ ဆရာမ ၊ ရဲ ၊ ဆရာဝန် စတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေသာ ရှိပါတယ် ။ ဝန်ထမ်းအနည်းငယ် ကိုးကွယ်ဖို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းတစ်လေ ရှိတယ်..။ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို […]
ညကွီးအခြိနျမတျော ကားပကျြလို့ဆိုပွီး တားလာသူမှာ စဈကားနဲ့ တပျမတျောသားတဈယောကျဖွဈနသေောအခါ
ညကွီးအခြိနျမတျော ကားပကျြလို့ဆိုပွီး တားလာသူမှာ စဈကားနဲ့ တပျမတျောသားတဈယောကျဖွဈနသေောအခါ လွိုင်လင်ကနေပြန်လာတုန်းကပေါ့ ဟိုပုန်းနားအရောက်မှာ ကုန်ကားတစ်စီး လမ်းမှာ ကိုယ်တွေကိုတားတယ်..! ညဘက်ကြီးဆိုတော့ ..တားတဲ့လူကလည်း လက်နှိပ်ဓါတ်မီးလေးနဲ့ပေါ့ ..!ကိုယ်တွေမောင်းတာ ..အရှိန်ကလဲများ ..ရပ်ဖို့ကလဲ အစီအစဉ်ကလဲမရှိတော့ မရပ်ဘဲ ဆက်မောင်းလိုက်တာပေါ့ …! ဒါနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ဖျတ်ကနဲ ..မြင်လိုက်မိတာက စစ်ကားနဲ့ […]